Ny hery ihany no halemena… | NewsMada
Ny hery ihany no halemena…
Par Taratra sur 07/05/2018
Aiza ho aiza ny toe-draharaham-pirenena amin’izao? Politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery… Ny tsy azo lavina, mbola eo aloha ny fitondrana: matanjaka, marin-toerana? Nandritra izay efa-taona izay, tsy nitsahatra nitady izay hahamarin-toerana sy hampatanjaka azy ny fitondrana. Izay nihetsika sy niteniteny rehetra, voasoketa ho manakorontana, manongam-panjakana…
Tsy mahagaga raha niseholany avokoa izao karazana tsy fahombiazana rehetra izao. Variana amin’izay fahamarinan-toerana sy fahatanjahana izay tsinona. Eo, ohatra, ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly avo lenta, ny kiantranoantrano, ny tsy fisaraham-pahefana, ny amboletra, ny jadona… Mby aiza izay hoe fahamarinan-toerana sy fahatanjahana izay amin’izao? Miseho ny hetsi-bahoaka.
Mbola mandaitra ve izay heverina hahamarin-toerana sy ho tanjaka hatramin’izay? Eo ny fampiasana herim-pamoretana amin’izay mitady hihetsika rehetra. Nanomboka nitsimbadika izany tamin’ny “Raharaha 21 avrily”? Nilazan’ny mpitandro filaminana fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany; eny, na misy aza ny miditra amin’ny politika ka mandrahona. Tsy hay tohaina ny herim-bahoaka?
Na izany aza, mandeha koa ny resaka ny amin’ny fisian’ny vola miparitaka anaovana kolikoly. “Hery” sy fahalemen’ny fitondrana izay fampiasam-bola sy kolikoly izay: mandra-pahoviana? Anisan’ny nampipoaka izao hetsi-bahoaka izao ny fandaniana ny lalàm-pifidianana hoe nisy kolikoly. Andrasana ny fanadihadian’ny Bianco. Mbola mandaitra ve ny fividianana olona?
Ho hita eo ny marina… “Hery” sy zary halemen’ny fitondrana koa ny lainga sy fitaka amin’ny fampanantenana poakaty, fampandriana adrisa, fanarian-dia… Tsy mandaitra intsony? Ny lainga toy ny salaka, ny tompony ihany no afatony. Izay ianteherana ho hery ihany no halemena, rehefa tonga ny farany. Na herim-pamoretana na jadona io, na vola sy ny kolikoly, na lainga sy fitaka…
Aleo lazaina sy hiseho ny marina? Mila mandainga inarivony izay te hanafina fitaka, hoy ny ohabolana vahiny iray izay.